Izinhlelo zokusebenza ezingafika ku-4.000 ze-Android kungenzeka zikuhlolele | Izindaba zamagajethi
Izinhlelo zokusebenza ze-Android ezingafika ku-4.000 kungenzeka zikuhlolele
Owokugcina umbiko inkampani yocwaningo ithole ukuthi kungahle kube nezinkulungwane zezinhlelo zokusebenza ze-Android ezithelelekile Smartphones kwepulatifomu nokuthi baqoqa imininingwane kuwo wonke umsebenzi. Njengoba kuchaziwe, bathole izehlakalo ezifika kwezingu-3 ezingalandwa ku-Google Play. Ngakho-ke ukufinyelela komsebenzisi kuqonde kakhulu kunokukwenza kusuka emithonjeni yangaphandle.
Elinye lamacala yilelo leSoniac, uhlelo lokusebenza lwesitayela seTelegram — okusho ukuthi, insizakalo yemiyalezo esheshayo — ebilokhu iqoqa lonke ulwazi kumaseva angaphandle. Futhi umsebenzi womsebenzisi wakhe ungene ngaphandle kwesaziso sangaphambilini. Ezinye izinhlelo zokusebenza ezitholwe ku-Google Play zaziyi- IHulk Messenger noTroy Chat. Konke ngephrofayili yohlelo lokusebenza efanayo. Manje, lezi zicelo ezintathu ezisuselwa ku-SpyWare SonicSpy.
El modus operandi yalezi zicelo zilula. Umdali angenza imiyalo ehlukile engama-72. Yize kugcizelelwa lokho into ejwayelekile kunazo zonke bekuwukubona ukuthi isithonjana sohlelo lokusebenza sanyamalala kanjani kudeskithophu. Kwakuyindlela engcono kakhulu yokungaqashelwa. Futhi ngemuva kuzorekhoda izingxoxo ezilalelwayo, ukuqoqa imininingwane koxhumana nabo nokugcina izingxoxo ezibhaliwe. Zonke zibonakala zizinze e-Iran.
Futhi, kusuka kwaLookout - inkampani ethole ifayela le- I-malware- khombisa ukuthi lezi Izinhlelo zokusebenza ezinonya zibe nokulandwa okungafika kokungu-5.000 (njengoba kunjalo nge-Soniac). Ngaphezu kwalokho, bancoma ukuthi konke ukulandwa kwenziwe ku-Google Play. Yilapho lapho uvame ukulawula kakhulu kulezi zinhlelo zokusebenza ezinonya. Futhi siyakhumbula ukuthi i-Android yipulatifomu ekuvumela ukuthi ufake isofthiwe kusuka kubantu besithathu ngaphandle kokuya esitolo sabo esisemthethweni sohlelo lokusebenza; ngokulanda nje ifayili elinokwandiswa kwe-APK efonini yethu, singaqhubeka nokufakwa kwalo ku-terminal. Futhi qaphela ukuthi ungachofozi izixhumanisi zemvelaphi engabazisayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Izinhlelo zokusebenza ze-Android ezingafika ku-4.000 kungenzeka zikuhlolele
Kuphephe ukulanda izinhlelo zokusebenza ku-Google Play kepha hhayi ngenxa yalesi sizathu kufanele wehlise ukuqapha kwakho.
Kunemibiko eminingi yezindaba yokuthi izinhlelo zokusebenza ezinonya ezitholakale esitolo esisemthethweni zisusiwe. Abanye banezinkulungwane zokulandwa ngaphambi kokuthi kutholakale.
Okubalulekile: i-antivirus yomqondo weselula nowokuvamile.
URuben gallardo kusho
Ngaphezu kwakho konke kufanele ube nento yokugcina oyikhombayo: ukuqonda.
Siyabonga ngokuphawula nokusifunda.
Phendula uRuben Gallardo
I-Amazon isusa izingilazi mbumbulu ukubona ukusitheka kwelanga komhlaka-21 Agasti 2017
I-NASA ifuna ukuhlola ukuthi kungenzeka yini ukuvikela umhlaba kwi-asteroid